Loharano ho an'ny mpitsidika amin'ny Gender Dysphoria & Transgender. |
Loharano ho an'ny mpitsidika
Hitanao eto: -
Rohy mankany amin'ireo boky miresaka ny firehan-kevitry ny miralenta ankehitriny. Boky ho an'ny ankizy.
Dokotera maromaro no nanoratra lahatsoratra manodidina ny hetsika transgender.
Prof John Whitehall dia nanoratra andian-dahatsoratra momba ny Gender Dysphoria. Betsaka no mifamatotra amin'ny fanondroana siantifika sy governemanta.
Misy rohy mankany amin'ny tranokalan'i Walt Heyer. Walt transgendered ary niaina vehivavy nandritra ny 10 taona talohan'ny famindrana toerana ary ankehitriny dia manohana transgender hafa te hiala amin'ny fomba transgender
Betsaka ny olona nandao ny fomba fiainany LGBT niaraka tamin'ny fanampian'ny hafa. Ireo no tantaran'ny olona 17 izay manohitra ny filazana fa manimba olona foana ny fitsaboana ny fiovam-po.
Ny fisorohana ny fahavoazana, ny fampiroboroboana ny fahamarinana dia taratasin'ny Oniversite La Trobe, Aostralia, izay milaza fa manimba olona hatrany ny fitsaboana ny fiovam-po. Dr. Con Kafataris dia nanoratra ny fanakianana azy tamin'ny taratasy La Trobe.
Dr John Whitehall dia nandrakitra andian-dahatsary 12 momba ny Childhood Gender Dysphoria. Hita eto ireo sora-tanana misy ireo horonantsary, izay azo adika amin'ny Internet amin'ny fiteny hafa.
Prof John Whitehall dia manoratra ao amin'ny Gazetin'i Quadrant.
Lahatsoratra momba ny Gender Dysphoria, Hormone Blockers ary ny zava-drehetra Transgender
Ny fandrarana ny safidy hafa amin'ny miralenta fanandramana amin'ny ankizy. - Prof John Whitehall. Ny governemantan'i Labour ao Victoria dia eo am-pamoronana ny lalàna handrara ny antsoina hoe 'fitsaboana fiovam-po' izay mamaritra azy ho 'fanao na fitsaboana izay mitady hanovana, hanelingelina na hanafoana ny fironana ara-pananahana na ny maha-izy azy'.
Olana lehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fitsaboana tetezamita: Fanontaniana sy valiny. - Prof Dianna Kenny.
Fandraisana anjara amin'ny fanatanjahantena vehivavy sy fanamafisana ny lahy sy ny vavy: Làlana fifandonana ho an'ny etika ara-pitsaboana. - Prof Dianna Kenny. -
Ao amin'ny 2009, Caster Semenya atleta atsimo, nandresy tamin'ny 20 metatra avy amin'ny mpifaninana akaiky azy indrindra, ny hetsika 800m vehivavy amin'ny fifaninanana amina atletisma. Fohy sisa ny fandreseny.
Nipoitra ny fiampangana fa "tena lehilahy i Semenya". Ny 18, 10 taona avy amin'ny tanàna iray nahantra tao amin'ny reniranon'i Limpopo any Afrika Atsimo dia nanjary lohahevitra tsy voamariky ny fampitam-baovao iraisam-pirenena izay nahitana ny famoahana ny pitsopitsony momba ny fitsaboana azy manokana raha tsy nanaiky.
Gender Dysphoria loharanom-pahalalana ho an'ny mpamatsy: Dr. William Malon.
Ankizy mitovitovy amin'ny lahy sy ny vavy: manampy ve ny fitsaboana ny diabeta? - Dr. Robert Kosky.
Tsy mazava ny lalan'ny torolàlana momba ny fitsaboana amin'ny zaza manakorontana ny lahy sy ny vavy amin'izao fotoana izao. Ity tatitra momba ny klinika ity dia mamaritra ankizy valo misy behavi0ur miralenta na lahy na vavy izay notsaboina tao amin'ny tobim-pitsaboana ho an'ny ankizy. Ny valiny fohy sy ny fandinihana klinika maharitra dia omena, izay manondro vokatra tsara amin'ny ankapobeny. fanerena, fa ny ain'ny zaza miankina amin'ny fahendreny.
Firaisana ara-nofo sy lahy sy vavy - Dr. Paul McHugh.
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Ny fanontaniana mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo sy ny lahy sy ny vavy dia misy eo amin'ny lafiny akaiky indrindra sy manokana amin'ny fiainan'ny olombelona. Tao anatin'izay taona faramparany dia nampijaly ny politika amerikana koa izy ireo. Atolotray ity tatitra ity - nosoratan'i Dr. Lawrence S. Mayer, epidemiolozista voaofana amin'ny fitsaboana aretin-tsaina, ary ny Dr. Paul R. McHugh, azo inoana fa ny ankamaroany
mpitsabo aretin-tsaina amerikana manan-danja tamin'ny taonjato faramparany.
Ny University La Trobe dia namokatra taratasy "akademika" antsoina hoe Preventing Harm, Mampiroborobo ny fahamarinana. Dr. Kafataris dia nanipika ny tsy fahombiazany maro.
Fianakaviana voalohany - NZ. Fampitandremana ataon'ny mpitsabo aretin-jaza iray any New Zealand - Prof John Whitehall.
Ny valanaretina «dysphoria gender gender» dia mamely ny tontolo tandrefana. Rehefa avy nipoaka tampoka noho ny fahita firy folo taona lasa izay dia misy ankehitriny ny fitomboan'ny isan'ny zaza atolotra amin'ireo singa noforonina manokana ao amin'ny hopitaly lehibe ho an'ny ankizy miaraka amin'ny fitarainana hoe: «teraka tamin'ny vatana diso» izy ireo.
Fitsaboana fiovam-po izay mandeha.
Resaka pelaka taloha, lesbiana roa ary resaka ex trans momba ny fandaozana ny fiainany taloha sy ny fomba nahatafiditra ny "torohevitra" Conversion Therapy.
Fangatahana fangatahana parlemantera momba ny tetezamita ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ho an'ny ankizy.
Taratasy nosoratan'i Prof John Whitehall ho an'ny minisitry ny fahasalamana aostralianina, ny depiote Greg Hunt.
Rush Limbuagh mampiseho tafatafa - Prof John Whitehall. -------------
Rohy mankany amin'ny serivisy ho an'ny toro-hevitra matihanina. --------------------
Rohy mankany amin'ireo mpanoratra boky sy mpivarotra.
Boky miresaka ny ideolojia Transgender. Boky mirindra mifanaraka amin'ny vakiteny ny ankizy.
Inona avy ireo zazalahy kely? Mpanoratra - Wendy Francis.
Zazalahy kely lasa lehibe. Tsy hisy mihitsy ny zazavavy. Izany ve no mahatonga ny ankizilahy kely manokana manokana? Eny, izany ary noho ny antony maro hafa. Azonao atao ve ny mihevitra ny sasany?
Hita ao amin'ny Koorong Bookshop. Tsindrio -> eto.
Inona avy ireo zazavavy kely? Mpanoratra - Wendy Francis.
Tsy misy olona afaka misafidy raha teraka zazavavy na zazalahy izy ireo. Ary ny iray tsy tsara noho ny iray hafa. Fa misy zavatra tsara be dia be amin'ny maha-zazavavy! Inona no mampiavaka ny zazavavy?